किन घटिरहेको छ सिमेन्टको भाउ? :: मिरा खतिवडा :: Setopati
घर बनाउँदा कुन सिमेन्ट प्रयोग गर्ने? के छ ओपिसी र पिपिसीको विशेषता?
कोरोना महामारीले अरू क्षेत्रझैं सिमेन्ट उद्योग पनि समस्यामा परे। कोरोना मत्थर हुँदा बर्खा सुरू भयो। अहिलेसम्म पनि पानी पर्न नछाडेपछि निर्माण काममा असर पर्‍यो। यसको प्रभाव सिमेन्टको भाउमा देखिएको छ।
अहिले सिमेन्टको माग धेरै नभएपछि कम्पनीहरूले मूल्य घटाएर बिक्री गरिरहेका छन्।
मूल्य घटाउनेमध्ये एक उद्योग हो अर्घाखाँची।
कम्पनीले ओपिसी गत वर्षभन्दा प्रतिबोरा एक सय रूपैयाँ घटाएर कारोबार गरिरहेको जानकारी दिएको छ।
अहिले अर्घाखाँची ओपिसीको कारखाना मूल्य प्रतिबोरा ६ सय २० रूपैयाँ छ। कम्पनीका अनुसार भ्याट, ढुवानी खर्च लगायत जोडेर वितरकसम्म पुग्दा ७ सय ६६ रूपैयाँ २५ पैसा हुन्छ। यसमा वितरकले दसदेखि बीस रूपैयाँसम्म नाफा राखेर बिक्री गर्छन्। त्यसैले उपभोक्ताले सात सय ७० देखि सात सय ९० रूपैयाँ सम्ममा पाउने अर्घाखाँचीका बजार प्रमुख रमेश थापाले जानकारी दिए।
प्रतिस्पर्धी बजारमा अस्तित्व कायम राख्न मूल्य घटाएर भए पनि आयतन फैलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
‘अघिल्लो वर्ष यही समयको मूल्यसँग तुलना गर्दा सय रूपैयाँ घटेको छ,’ रमेशले भने।
उनका अनुसार अहिले सिमेन्टको भाउ पाँच/सात वर्षअघिको दरमा पुगिसकेको छ। २०७२ को भूकम्पपछि अलिकति बढे पनि अहिले त्यसभन्दा अगाडिकै भाउमा पुगेको उनले बताए। सात वर्षअघि अर्घाखाँचीको सिमेन्ट प्रतिबोरा ६ सय ७८ रूपैयाँ थियो।
‘मागभन्दा पूर्ति बढी भएपछि मूल्य घट्नुपर्ने अर्थशास्त्रको नियम छ। हाल हामी यही नियमअनुसार चलिरहेका छौं,’ थापाले भने।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार क्षेत्र धरापमा परेकाले आवास निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ। आम्दानी स्रोत हेरी घर बनाउनेको संख्या कम हुँदै गएको पनि उनले बताए।
‘मान्छेले नयाँ घर बनाउने आँट गरेका छैनन्। भइरहेका निर्माण क्षेत्रमा आफ्नो बजार खोज्दा मूल्य घटाएर कारोबार गर्नु परेको हो।’
हालसम्म पुरानै दरमा बिक्री भइरहे पनि दसैंपछि अर्घाखाँची सिमेन्टको भाउ केही बढ्ने पनि उनले जानकारी दिए।
'कोइला र ढुवानी खर्च बढेको छ। यस कारण दसैंपछि बोरामा बीस रूपैयाँ बढाउने निर्णय गरेका छौं,' रमेशले भने।
सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्टले पनि केही दिनअगाडि मूल्य घटाएको थियो। उद्योगका बिक्री तथा बजार प्रमुख श्याम नारायण चौरासियाका अनुसार हेटौंडा ओपिसीमा प्रतिबोरा ४५ रूपैयाँ २० पैसा कम भएको हो। पहिले प्रतिबोरा ७ सय ४७ रूपैयाँ ९३ पैसामा बिक्री भइरहेको थियो। हाल प्रतिबोरा ७ सय एक रूपैयाँ ७३ पैसा कायम भएको छ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादन संघका अनुसार बजारमा मागभन्दा पूर्ति धेरै हुन थालेपछि मूल्य घटाएर बिक्री गर्ने अवस्था आएको हो। मेसिन क्षमता बढाउन र कर्मचारी सञ्चालनका लागि कारखाना चालू राख्नु पर्ने हुँदा उत्पादन गरिराख्नुपर्छ। यस्तोमा उत्पादन बढ्ने र माग घट्ने अवस्था आएको संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन्।
‘सिमेन्ट अन्य साना उद्योगजस्तो चाहिँदा मात्रै खोल्न मिल्ने हुँदैन। मेसिन क्षमता कायम राख्न पनि चलाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनपछि सिमेन्ट लामो समय भण्डारमा राख्न मिल्दैन। मूल्य घटाएर भए पनि सस्तोमा बेच्नु पर्ने बाध्यता कम्पनीहरूलाई छ।’
अनि काम भएन भनेर कर्मचारी हटाउन पनि मिल्दैन। मूल्य कम गरेर बजार टिकाउने बाटो नखोजे कम्पनीले धेरै घाटा बेहोर्नुपर्ने उनले बताए। प्रतिस्पर्धी बजारमा ग्राहकले आफ्ना उत्पादन पाएनन् भने बजार गिर्ने सम्भावना हुन्छ।
उनले भने, 'यस्तै कारणले सिजनका बेला मूल्य घटाएर बेच्नेतिर कम्पनीहरू लागिरहेका हुन्।’
अध्यक्ष ध्रुवका अनुसार हाल नेपालभर साना तथा ठूला ६४ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। तिनले अहिले आधा क्षमतामा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यसैले उद्योगीहरूलाई खर्च उठाउन मुश्किल परिरहेको उनी बताउँछन्।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष समग्रमा सिमेन्टको बजार १५ प्रतिशत घटेको संघले जनाएको छ। मूल्यमा पनि ५ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ।
हामीकहाँ ओपिसी र पिपिसी गरी दुई प्रकारका सिमेन्ट निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। घर बनाउन प्रयोग गरिने सिमेन्टबारे जान्नुअघि ओपिसी (अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट) र पिपिसी (पोर्टल्यान्ड पोज्जोलोना सिमेन्ट) ले कसरी काम गर्छ बुझ्न आवश्यक छ।
निजी आवास निर्माण कम्पनी 'मेरो घर' का सिइओ तथा इञ्जिनियर विपीन गैरेका अनुसार कुनै पनि सिमेन्टले पानीको सम्पर्कमा आएपछि यसको वास्तविक गुण देखाउँछ।
'ओपिसी निर्माणमा छिटो सेट हुने सिमेन्ट हो,' इञ्जिनियर गैरेले भने, 'जुन निर्माणलाई छिटो सक्नुपर्ने हुन्छ वा छिटो फर्मा खोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ यो सिमेन्ट प्रयोग गरिन्छ।'
ओपिसी स्ल्याब, पिलर, पुल ढलान आदि काममा प्रयोग हुन्छ। तर ढलानका लागि ओपिसी मात्रै प्रयोग हुँदैन। निर्माण समय लामो राखिएको छ भने पिपिसी पनि प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
'ढलानका लागि ओपिसी नै चाहिने होइन,' उनले भने, 'कुनै ढलान लामो समय (फर्मा नखोली) राख्न सकिन्छ भने पिपिसी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।'
सामान्यतया ओपिसी ढलानको 'क्योरिङ' (ढलान बस्न दिइने समय) २० दिनसम्म हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड क्योरिङ समय भने २८ दिनसम्म हुने उनले जानकारी दिए। ओपिसी ३३, ४३ र ५३ ग्रेडमा पाइन्छ। ग्रेड भन्नाले सिमेन्टको मजबुती हो। छिटो सुक्ने र छिट्टै चर्किने भएकाले भित्ता प्लास्टरमा यो सिमेन्ट प्रयोग नगर्न इञ्जिनियर गैरेको सुझाव छ।
पिपिसी भने ओपिसीभन्दा मसिनो हुन्छ। यो ओपिसीभन्दा प्रतिबोरा १०० रूपैयाँसम्म सस्तो पनि हुन्छ। गैरेका अनुसार सस्तो हुनुको मतलब कमसल भने होइन।
'पिपिसी हतार नगरी, लामो समय पानी राख्न सकिने निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'सस्तो हुनु भनेको कमसल होइन। पिपिसीको ढलान गरेर पनि निर्माण बन्न सक्छ।'
पर्खाल वा गारोको मसला, प्लास्टर, भुइँ ढलान आदिमा लामो समय पानी राख्न सकिन्छ। त्यसैले यस्ता ठाउँमा पिपिसीको उपयोगिता धेरै हुने उनले बताए।
कहिलेकाहीँ ओपिसी बढी बलियो मानेर सबै निर्माणमा यही सिमेन्ट प्रयोग गर्न उपभोक्ता तत्पर हुने गैरेको अनुभव छ। तर प्लास्टरमा ओपिसी प्रयोग गर्दा छिटै चर्किने सम्भावना हुन्छ। साथै संरचना नराम्रो देखिने उनी बताउँछन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २०, २०७८, ०६:१३:००